यसको लागि संयोजन गरिरहनु भएका हयारी भण्डारीले दिनु भएको जानकारी अनुसार मेरील्याण्ड राज्यका लागि डा.श्याम कार्की, भीम कट्टेल,गौतम दाहाल,अमर छन्त्याल लगायत ५५ सदस्य, न्यूयोर्कमा विश्व शाह, खगेन्द्र जिसी, डा.विनोद शाह ,कृष्ण पोख्रेल लगायत ११ जना,भर्जिनियामा हरि शर्मा,जीवन तिवारी,भरत वराईली लगायत ७ जना, जर्जियामा मोहन तिमिल्सेना, डा।.सञ्जीव सापकोटा, डा. अनुप श्रीवास्तव लगायत ८ जना, पेन्सलभेनिया डा.केशव भण्डारी, डा. वर्षा मोक्तान, फ्लोरिडामा विमल नेपाल, विकास देवकोटा, एनिला न्यौपाने, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगायत रहनु भएको छ । यसैगरी क्यालिफोर्नियामा ऋषि ढकाल, भक्त थापा, रोजर अधिकारी, उमा कार्की, राजेन्द्र शिवाकोटी, अनिल पाण्डे, डिल्ली भट्टराई, हरिहर दाहाल, सञ्जय घिमिरे लगायत रहनु भएको छ । कोलोराडोवाट वासु खनाल, नारायण श्रेष्ठ र शैलेश पोखरेल, ईलिनोईजवाट सुमन बस्ती, मधुसुधन वुढाथोकी लगायत १३ जना,टेक्सासवाट गौरी जोशी, हरिवोल भण्डारी, कृष्ण लामिछाने रहनु भएको छ । म्यासाचुटेसवाट महेश्वर पन्त, न्यूहयाम्सायरवाट भोला शिवाकोटी, कृष्ण गिरी लगायतको रहनु भएको छ ।